Ihe kpatara ọdịnaya Onye ji eme ihe na-achị Kasị Elu na Oge nke Social Media | Martech Zone
Ọ bụ ihe ịtụnanya ịhụ etu teknụzụ siri wee dịrị n’oge dị mkpirikpi. Ogologo oge gara aga bụ ụbọchị Napster, MySpace, na ntinye AOL na-achịkwa ahịa n'ịntanetị.
Taa, usoro ntanetị mgbasa ozi na-achị kachasị elu na mbara igwe dijitalụ. Site na Facebook ruo Instagram ruo Pinterest, ndị na-elekọta mmadụ a aghọwo ihe dị mkpa nke ndụ anyị kwa ụbọchị. Elela anya karịa oge ole anyị na-etinye na mgbasa ozi mmekọrịta kwa ụbọchị. Stastista kwuru na onye ọ bụla na-emefu ego Nkeji nkeji 118 kwa ụbọchị na-eme nchọgharị na netwọk mmekọrịta. Ọ ghọọla otu anyị si ekwurịta okwu, gosipụta mmetụta, na ọbụnadị ire ndị ahịa gburugburu ụwa ngwaahịa.
Ka anyị lebakwuo anya n'otú azụmaahịa si enyere ndị mgbasa ozi mmekọrịta aka ka ha wee tolite akara ha, na-agbanwe ihe nchọgharị na-enweghị atụ n'ime ndị ahịa na-eguzosi ike n'ihe.
eCommerce, Social, na UGC: Ruo Mgbe Ebighị Ebi
ECommerce ụwa aghọọla otu ebe kachasị asọmpi maka azụmaahịa ga-aga nke ọma. Na ụlọ ọrụ na ntanetị na nke na-anọghị n'ịntanetị na-achọ ka ha nweta ego nke ike nke mgbasa ozi mmekọrịta, ịkọwa ọdịiche dị n'etiti gị na asọmpi ahụ esiwanye ike karịa mgbe ọ bụla.
Yabụ kedu ka ndị na-ere ahịa eCommerce gara nke ọma si eme ya? Azịza ya bụ ọdịnaya nke onye ọrụ.
N'isiokwu a, anyị ga-abanye miri emi na ihe kpatara ejiri ndị ọrụ rụọ ọrụ bụ ngwa ọrụ kachasị mkpa ị nwere ike iwe na afọ mgbasa ozi. Anyị ga-emetụ na isi okwu mgbasa ozi ọhaneze ọ bụla, na-ekpuchi ndụmọdụ na omume kacha mma iji jiri UGC ma nyere azụmahịa gị aka ịchịkwa mmekọrịta mmadụ na ibe ya.
Ha na-ekwu ọdịnaya bụ eze. Ọfọn, anyị kwenyere na ọdịnaya ndị ọrụ mepụtara bụ eze ugbu a. Bịa chọpụta ihe kpatara ya:
Gbanwee ihu ahia ahia nke Instagram gi ka o buru ihe itunanya
Anyị bi n'ụwa ebe uche anyị dị na njedebe. Na soshal midia kpọmkwem, ndị ọrụ nwere mmasị karịa ịgụ na ịpịgharị karịa ịgụ nnukwu akwụkwọ ederede. Nke a bụ ihe kpatara Instagram ji bụrụ ikike a ga - agụ, na - emepụta akụkụ buru ibu nke ndị ọrụ na-eguzosi ike n'ihe na ikpo okwu foto ha.
Data na-akwado ihe ịga nke ọma ha. N'ezie, nke ọwa mmekọrịta ọ bụla, okporo ụzọ eCommerce na-echekwa site na Instagram na-anọ ọdụ na ọdụ kachasị ogologo na sekọnd 192.4. Chaatị dị n'okpuru na-egosi etu Instagram si agbachitere asọmpi ahụ:
Yabụ kedu ka isi tinye ikike nke Instagram ma jiri ikpo okwu wee malite ire? Ihe eji eme ihe nke onye ọrụ, n'ezie.
Ndị mmadụ tụkwasịrị obi na foto na ọdịnaya sitere n'aka ndị ahịa n'ezie, karịa ndị na-ere ahịa n'onwe ha. Ọ na-enye ndị ahịa ohere ịhụ na ngwaahịa ndị ị na-ere na-atọ ndị ahịa gburugburu ụwa ụtọ.
Gbalịa ijikọ foto ndị ọrụ mepụtara na Instagram na njirimara ọhụụ na-atọ ụtọ nke Yotpo wepụtara n'oge na-adịbeghị anya Shoppable Instagram. Shoppable Instagram na-enye ohere ika eCommerce iji gbanye veranda ha Instagram shoppable. Usoro dị nnọọ mfe.
Uzo ozo jikotara na ntaneti Instagram gi, ihe ntanetita Instagram bu onyonye anya nke ibe mbu Instagram gi. Nke a na - achota na ndị ahịa na - enweta ahụmịhe dị mfe iji pịgharịa gaa na ha tụrụ anya, mana yana mgbakwunye nke ịme ọdịnaya ha hụrụ ka a ga - akwụ ụgwọ. Ime ọdịnaya ahụ ha hụrụ site na onye ọrụ bụ ngwaọrụ dị egwu.
Ezigbo ihe atụ nke onye na-ere ahịa eCommerce na-eji ohere zuru oke nke ijikọta UGC na Shoppable Instagram bụ Ogwe osisi. Onye na-ere ahia Landsurfing na-ewu ewu, ha ghọtara ike nke ịtụgharị foto ndị ọrụ na-emepụta na Instagram ka ọ bụrụ njikọ nwere ike ịpị ya na pịa bọtịnụ. Dịka ị pụrụ ịhụ n'okpuru, nsonaazụ ya bụ ụlọ ahịa dị ọcha, nke sitere n'aka ndị ahịa nke dị ka onye ọrụ anaghị ahapụ Instagram:
Soro ntuziaka nke Hamboards, ma jikọta Instagram Shoppable na ọdịnaya ndị ọrụ mepụtara maka ihe ịga nke ọma eCommerce na Instagram.
Jiri nyocha UGC mee ka mgbasa ozi Facebook gị pụọ na igwe mmadụ
Anyị niile maara akụkọ Facebook na mmekọrịta mmadụ na ibe ya. Site na echiche n'ime ụlọ ezumike Harvard ruo ọtụtụ ijeri dollar, Facebook bụ ihe ịga nke ọma na mgbasa ozi mgbasa ozi na 21st narị afọ. Ikpo okwu a na-aga n'ihu na-agbanwe, na-agbanwe oge niile ka anyị si emekọrịta ma na-ekwurịta okwu.
Maka azụmahịa ọ bụla, ọ nwere ike ghara inwe ebe dị mma iji kpọsaa ngwaahịa gị karịa na Facebook. Ọ bụghị naanị na ha na-eme usoro ahụ dị mfe dịka o kwere mee, mana ikike mgbasa ozi gị nwere na ndị ahịa nwere ike enweghị njedebe.
Greatzọ dị mma iji nweta mgbasa ozi gị na-adọta ndị ọrụ Facebook bụ iji ọdịnaya sitere n'aka ndị ahịa gara aga. Naanị igosipụta nyocha dị mma sitere n'aka ndị ahịa nwere obi ụtọ na mgbasa ozi Facebook gị, ROI maka ngwaahịa ahụ na-agbago elu.
Were MYJS, ụlọ ahịa ọla n'ịntanetị, dịka ọmụmaatụ. Companylọ ọrụ ọganiihu na-aga nke ọma maka ihe karịrị ọgbọ 3, ha ghọtara ngwa ngwa ike nke mgbasa ozi mmekọrịta yana mkpa inwe ọnụnọ n'ịntanetị.
Site na Facebook ịbụ onye mgbasa ozi mgbasa ozi dị otú ahụ, MYJS ghọtara mgbasa ozi na Facebook dị mkpa. Mgbe ha malitere iji Yotpo na UGC na ha Facebook mgbasa ozi site na iji nyocha sitere n’aka ndị ahịa gara aga, metrik ha kaara nke ọma. UGC rụpụtara ọnụahịa-nnweta nnweta nke 80%, ma n'otu oge na -emepụta mmụba 200% na pịa-site na ọnụego yana.
Oghere mgbasa ozi Facebook jupụtara na narị otu narị puku azụmahịa. Iji UGC n'ime mgbasa ozi Facebook gị nwere ike ịbụ azịza nke ịme nke gị.
Pinterest: Nzuzo nzuzo gị na-ahụ maka mgbasa ozi nke na-achọ ka ọdịnaya onye ọrụ
A na-elegharakarị ya anya mgbe ọ na-ekwu banyere ikpo okwu mgbasa ozi mmekọrịta mmadụ na ibe ya, Pinterest na-efe n'okpuru radar na ọtụtụ ụdị na-ere n'ịntanetị. Nkwenye a na Pinterest adịghị mkpa dịka ndị ọzọ bụ nlekọta nke ụlọ ọrụ ọ bụla dabara n'okpuru echiche a. Pinterest bụ otu n'ime usoro mgbasa ozi mmekọrịta na-eto ngwa ngwa yana itinye aka dị ukwuu, na-achọsi ike ịzụta isi ọrụ.
UGC na - arụ ọrụ dị iche iche, mana dịka mkpa nke ọrụ na Pinterest. Na ulo oru tinye n'ọrụ “mbadamba” na “atụdo”, Pinterest bụ nke zuru oke ikpo okwu maka ikwe ka ndị ahịa gosipụta ekele site na ịgwọ ndị ọrụ mepụtara na bọọdụ ndị a.
Otu n'ime ụdị eCommerce kachasị aga nke ọma, Warby Parker, na-etinye UGC na Pinterest zuru oke. Ha kere mbadamba aha ya Ndị Enyi anyị n’igwe anyị, ebe ha na-egosipụta ihe ngosi ndị a ma ama n'ịntanetị na-eyi ugegbe anya ha n'ọtụtụ ntọala. N'ime ihe karịrị 35 puku ndị na-eso ụzọ na bọọdụ a naanị, Warby Parker ghọtara ma nwee nnukwu ohere iji ọdịnaya sitere na onye ọrụ dị ka akụkụ bụ isi nke ha Atụmatụ ahia ahia.
Anyi bi n'ime ụwa na-elekọta mmadụ mgbasa ozi
Anyị na-enweta ozi anyị site na ndepụta ozi karịa akwụkwọ akụkọ. Anyị na-achọ ihe ọmụma banyere njin ọchụchọ kama n'ọbá akwụkwọ; ihe niile dị ugbu a na ndụmọdụ nke mkpịsị aka dijitalụ anyị. Ma nke a ọ bụ ihe ọma ma ọ bụ ihe ọjọọ maka ọha mmadụ bụ maka arụmụka na echiche ọha na eze. Ihe na-abụghị maka arụmụka, agbanyeghị, bụ mkpa UGC dị na mbara igwe mgbasa ozi. Ihe ndị mepụtara site na onye ọrụ na-eme ka e nwee ntụkwasị obi na izi ezi dị n'etiti ụlọ ọrụ na ndị na-azụ ahịa, nke soshal midia bụ ọrụ na - adịkarịghị ịrụzu. Ma ọ bụrụ Facebook, Instagram, ma ọ bụ Pinterest, ndị ọrụ na-emepụta ọdịnaya na mgbasa ozi mmekọrịta ga-ejikọta ọnụ maka ọtụtụ afọ na iri afọ ndị na-abịa.
Tags: content MarketinginstagramPinterestụlọ ahịa instagramuGConye ọrụ mepụtara ọdịnayaYotpo
Corey oge ntoju
Corey Bloom bụ njikwa ọdịnaya ọdịnaya na Yotpo. Mgbe ọ naghị ekwu maka ọdịnaya ndị ọrụ mepụtara, ị ga - ahụ ya ka ọ na - achọ ebe ọzọ dị mma ị ga-eri.
Snapchat ọ na-emetụta ndị ahịa?